देशभक्त नेपालीको साझा आवाज : खबरदार विस्तारवाद-नारायण शर्मा | रक्त न्युज
देशभक्त नेपालीको साझा आवाज : खबरदार विस्तारवाद-नारायण शर्मा
हाम्रो मातृभूमिमा विस्तारवादी खुनी नङ्ग्राहरु गढेको वर्षौं वर्ष बितिसक्यो । देशमा कैयौं सरकारहरु फेरिए । सरकार मात्र होइन, व्यवस्था नै बदलिए । तर आजसम्म देशको अभिभावक ठानिने कुनै पनि सरकारले मातृभूमिको छातीबाट त्यो विस्तारवादी खुनी नङ्ग्राको खिल निकालेर फयाँक्न सकेका छैनन् ।
अहिले पनि उस्तै पीडा दिइरहेका छन् कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, महेशपुर र पशुपतिनगर लगायतका स्थानहरुमा विस्तारवादले हाम्रो मातृभूमिलाई दिएका घाऊहरुले । पटक–पटक बल्झिरहन्छ विस्तारवादले दिएको घाउको त्यो पीडा ।
देशमा अहिले ‘कम्युनिस्ट’ भनिने दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकार छ । लुटिएको मातृभूमिका भागहरु फिर्ता ल्याउनका लागि यो सरकारले गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नेछ भन्ने जनअपेक्षा थियो । तर अघिल्लो कार्यकालमा भारतको अमानवीय नाकाबन्दीसामु नझुकेका, उत्तरी छिमेकी चीनसँग साहसपूर्वक पारवहन लगायतका सन्धि गरेका वर्तमान प्रम केपी शर्मा ओली र त्यही राष्ट्रवादी ‘छवि’ का कारण निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत ल्याएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा यसपटक त्यो गम्भीरता झल्कन अझै सकेन ।
हाम्रो भूमिलाई आफ्नोमा पारेर भारतले जाली नक्सा सार्वजनिक गरेको महिनौं बितिसक्यो । भारतले जारी गरेको उक्त जाली नक्साका विरुद्धमा देशविदेशमा रहेका नेपालीहरुले जनस्तरबाट व्यापक विरोध गरिरहेका छन् । भारतको विस्तारवादी नीतिका विरुद्धमा देशमा दिनहुँजसो आन्दोलनहरु भइरहेका छन् । तर “राष्ट्रवादी” छविबाट अत्यधिक बहुमतका साथ सत्तामा आसीन हुन पुगेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म यो समस्या समाधानार्थ कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको देखिएको छैन । राजनीतिक र कुटनीतिक तवरबाट जुन ठोस एक्सन सरकारले लिनु पथ्र्यो, त्यो लिन सकेको छैन । बोल्न त प्रधानमन्त्रीले पनि बोलेका छन्– हाम्रो लुटिएको भूमि हामीले फिर्ता ल्याइछाड्छौं भनेर । तर बोलीअनुरुपको व्यवहार प्रष्टरुपमा देखिने र बुझिने गरी बाहिर आउन सकेको छैन अझै ।
सरकारले अहिलेसम्म पनि नेपाली भूमि समेत आफ्नोमा पारेर किन जाली नक्सा जारी गरियो ? भनेर भारत सरकारलाई औपचारिक रुपमा सोध्न सकेको छैन । लैनचौरमा रहेका भारतीय राजदूतलाई सिंहदरबार बोलाएर सोध्न सकेको छैन । कुटनीतिक पहल अगाडि बढाउन भनेर परराष्ट्रस्तरीय समिति त बनाएको भनिएको छ तर त्यो समितिले अझै कुनै ठोस काम अगाडि बढाएको थाहा छैन । यस विषयमा भारतसँग राजनीतिकस्तरमा वार्ता गर्न वरिष्ठ नेतालाई भारत पठाउने त भनियो तर अझै त्यस्तो वार्ता भएको थाहा छ्रैन । ‘राष्ट्रवादी’ ओली सरकारबाट आन्तरिक कुटनीतिक प्रयास गरिएकै छैन वा गरेर पनि भारतीय शासकहरुले टेरपुच्छर लगाएका छैनन् ? आगामी दिनमा यो रहस्यको पर्दा खुल्दै जाला  ।
गीतले इतिहासको त्यो यथार्थ घटनालाई प्रष्टरुपमा इंगित गरेको छ, जुन बेला हाम्रो कालापानीमा भारतीय सेनाहरु आएर बस्न शुरु गरेका थिए । वास्तवमा सन् १९६२–६४ को भारत–चीन युद्धका बेला चीनसँग पराजित हुँदा पछि हटेका भारतीय सेनाहरु सुरक्षित हुनु हाम्रो कालापानीमा बसेका थिए । चिनियाँ सेनाहरु आफ्नो सीमाभन्दा तल आएनन् र हाम्रो कालापानीमा लुकेका भारतीय सेनाहरु त्यो बेला बच्न पुगे ।
नेपाल सरकारले पनि त्यो बेला सायद शरण परेकालाई मरण दिनु हुन्न भन्ने सोचेरै तत्काल आफ्नो कालापानीबाट भारतीय सेनाहरु हटाएन । तत्कालीन नेपाली शासक महेन्द्र शाहले देशमा बहुदलीय व्यवस्थालाई खारेज गरेर निरकुंश पंचायती व्यवस्था लादेका थिए । २०१७ सालको उक्त घटना ‘कु’पछि नेपालमा राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित थिए । के थाहा महेन्द्रले नेपालको कालापानीबाट भारतीय सेनाहरु नहटाउने, भारतले महेन्द्रको १७ सालको ‘कु’ लाई समर्थन गर्ने आन्तरिक सहमति पो भएको थियो कि ? महेन्द्रले आफ्नो शासन अवधिभरि कहिल्यै पनि कालापानीमा बसेका ती भारतीय सेनाहरु हटाउन कुनै पहल गरेनन् । नेपालको उत्तरी सिमानाका १८ स्थानमा राखिएका भारतीय सेनाका चेकपोष्टहरुमध्ये कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएका बेला १७ वटा त हटाइयो तर त्यही कालापानीका भारतीय सेनाहरु हटाइएन । त्यतिबेला आफू सुरक्षित हुन हाम्रो कालापानीमा “ओत” लाएका भारतीय सेनाहरुले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि क्रमशः घात र अतिक्रमण गर्दैै गए । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले प्रष्ट बोल्छ नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी हो र महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो ।
लिम्पियाधुरा, कालापानीभन्दा निकै पर पर्दछ । तर कालापानीमा बसेका भारतीय सेनाहरुले त्यही नजिकैको खोल्सालाई महाकालीको नक्कली मुहान बनाए । त्यसैका आधारमा कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको ३७००० हेक्टर नेपाली भूमि आफ्नोतिर पारेर भारतले अहिले नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । यसरी पहिले “ओत” लाग्नका लागि नेपालको कालापानीमा शरणमा बसेको भारतीय सेनाले अहिले ‘बेइमानी’ गरेर नेपाली भूमि अतिक्रमित गरेको छ । गीतले त्यो यथार्थता प्रष्टरुपमा बोकेको छ ।
अघिल्लो लेखमानेपाललाई आतङ्कवादी समूहको अखडा भन्ने अमेरिकी प्रतिवेदनबारे गृह मन्त्रालयको प्रतिक्रिया
अर्को लेखमाउपसभामुखबाट अध्यक्षता गर्दै संसद् अधिवेशन प्रारम्भ